Creative Writing » တရားခံဘယ်သူလဲ	23
ဓာတ်အမှန်ပါပဲ ။ တနေကုန်တဲ့အထိဘာအလုပ်မှမလုပ်ဘဲ ဆန္ဒပြနေကြတာ ညနေ ၃ နာရီ
ဆိုတာကိုတော့ ဥက္ကဌတစ်ယောက်ပဲ သိပါလိမ့်မယ် ။ ဘယ်သူ့ ကိုမှအပြစ်ပြောလို့ မရဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်တယ် ။
အစိုးရအဆက်ဆက် ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံ ဆင်းရဲတွင်းမှ အမြန်လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေ . . .
5.7.2015 About Sine Sant
kai says: သာမန်အားဖြင့်… ဒီမိုကရေစီအရင်းရှင်နိုင်ငံတွေဟာ.. အရင်းရှင်ဖက်ကရပ်တည်ရပါတယ်..။
ဦးကြောင်ကြီး says: လှုပ်မနေပါနဲ့ အူးမာမွပ်ရယ်.. အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေမှာ ရတဲ့ အလှုပ်သမား အခွင့်အရေး ဆယ်ဗုံတဘုံတောင် မြန်တျန့်အလှုပ်သမားတွေ မရလျှာ…။ ၁၂နှစ်အောက် ခလေးတွေ အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိ၊ ကျောင်းတက်ရမည်ဆိုတာ ရေတိုကြည့်လျင် မိသားစုဝင်ငွေ နည်းတာမှန်ဗေမှည့် ရေရှည်မှာတော့ပညာမဲ့ပီး လမ်းပေါ်မျောက်အောင် တားဆီးနိုင်ဒယ် မှုတ်လား..။ လအုခဲ ဒီလိုပဲ… လူတယောက် ရှင်သန်ကြီးထွားမည့် လစာမပေးဘဲ ဂုတ်သွေးစုပ် အမြတ်ထုပ်နေတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေ အလုပ်တွေကို အုပဒေနဲ့ မထိန်းချုပ်ရင် ဘယ်ဒေါ့မှ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး မတိုးတက်လာ။
kai says: အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေက အလုပ်သမားတွေ သူတို့တိုင်းပြည်အတွက်ရှာပေးတာရဲ့.. ဆယ်ပုံတပုံလည်း မြန်မာအလုပ်သမားတွေက ရှာပေးတာမှမဟုတ်တာကွယ်…
ကကြောင်ကြီးတို့လို.. ပန်းဆီရောင်မရင့်တရင့်တွေက.. တင်ကြွေးမှာလား… သိချင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: မပေးနိုင် ဖင်ပိတ်ငြင်းလို့ မဖြစ်ဘူးလေ အိုအိုင်စီကိုယ်ဇလှယ် အူးမာမွပ်ရဲ့…။ အလှုပ်သမားဖက်က အခြေဂံ ဆားဇရိတ်၊ နေထိုင်ဇယိတ်၊ လူနေမှုဇယိက် တွက်ချက်ပီး ခိုင်ခိုင်မာမာ တောင်းသလို အလှုပ်ရှင်badကလည်း ဘာကြောင့် မပေးနိုင်.. ဘယ်ဒွေမှာ ဆားရိတ် ထောင်းနေလဲ ချက်နဲ့လာဘ်နဲ့ ထုတ်ပြနိုင်ရမည်။ နို့မို့ဆို နိုင်ရာဖိထောင်း အဆိုးရမနိုင် အလှုပ်သမား ဖိထောင်း ဖြစ်နေမှာပေါ့စ်..။ မြေဈေးကြီးလို့ပါဆို… မြေရှင်ဘယ်သူလဲ… မြေငှားဂ ဘယ်လောက် အခွမ်ဆောင်သလဲ.. အခြားဇရိတ်တွေလှဲ ဂလိုပဲ… ဘယ်သူရလို့ ဘယ်လောက် အခွံစောင်သနီး..။ ဒဂယ်ဟုတ်လျင် အစိုးမြကနေ အိတ်စိုက်ထုတ် ကူပေးလို့ ယဒါပေါ့စ်..။ အခုဒေါ့ဂျာ…. ဇဂေါလှောက်မှ ဇောက်မနက် … တောက်စ်
မြစပဲရိုး says: တကယ်တော့ အလုပ်ရှင် တွေ ကိုလဲ အပြစ် သိပ်ပုံလို့ မရပါ။
ရှိ စေတော့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: အဲဒီေ၈ါင်းဆောင်တွေ နောက်လိုက်ရင်းနဲ့ပဲ ရာဇုနှစ်တဆိတ် ကျော်ခဲ့ပီ လော်ဘီတီတီမြရေ….. ကျိလှုပ် ကြိလုတ်…။ ကိုယ်ဒိုင် ဝင်လှုပ်ရ မကောင်း ရှိဒေါ့မယ်.. ဒင်းရို့ နေရာပျောက်ကုံမှာ စိုးရို့…
မြစပဲရိုး says: ဒီ ခေါင်းဆောင် မှာလဲ သွား ရတဲ့ လမ်း က ဖြောင့် မ နေဘူး လေ ကွန်နစ်ကြောင် ရဲ့။
မြစပဲရိုး says: အဘ လူ တွေ က ဒီဘက် က လူ တွေ ထက် ပိုပြီး စည်းလုံးကြတာ ကိုလဲ မမေ့နဲ့ ဦး။
ဦးကြောင်ကြီး says: အစိုးမြနဲ့ အတိုက်အခံ၊ အစိုးမြနဲ့ သဘုံ စကားပြောဖို့ အာဏှာလာဘ်ဝယ်ရှိသူမှာ ပိုတာဝံ ရှိတယ်လို့ ယေဘူယျသတ်မှတ်တယ်.. တီတီလော်ဘီမြရဲ့…။ ဂလိုဘဲ ခေါင်းဆောင်ဘွားဒေါ်ဂျီးနဲ့ သဘောထားကွဲလွဲသူ အခြား ဒီမိုေ၈ါင်းဆောင်မြှားအကြား ညီညွှတ်ရေးမှာလဲ အင်အားပိုကြီးသူက တာဝံပိုယူရမဲ…။ ငါ့နောက် ကောင်းကောင်းလိုက်ကြ.. မဟုတ်လျင် ဒေဝေါ၈ျီးဆွဲလိပ်မြည်း ဆိုတာ တခါဟုတ်မယ် နှစ်ခါဟုတ်မှယ် ဆယ်ခါဆိုလျင်ဒေါ့ မီဟုတ်တော့ ဗူး..။
မြစပဲရိုး says: လမ်းပေါ်ကို ရောက်ဖို့ အရင်လုပ်ပါအူး ကွန်နစ်ကြောင် ရယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: နှစ်အဆိတ် ကြော်ဘီလေဂျာ… လှုပ်နည်းလှုပ်ဟံဗောင်းလည်း စုံပီ။ တဖက်က တုပ်တုပ်မျှ မီလှုပ်ဆိုရင်… ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပျံ ဆစ်ချိန်ရောက်ပီပေါ့စ်..။ ဒီမိုကရေစီ ယုန်တယ်၊ အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှု ယုန်ဒယ်.. စေ့စက်ညှိနှိုင်းရေး ယုန်ဒယ်ဆို… မူအရ မှန်နေဒယ်ဆို လူဖက် ပြန်လှည့်ဖို့ အခြိမ်ယောက်ပီပေါ့။။
မြစပဲရိုး says: ဒီ စစ် အစိုး ရ ရဲ့ ၂၅နှစ် ကျော်ကို ပြန်ကြည့်။
မြစပဲရိုး says: ဘော်လုံးကန် ရင် နည်းမှန်၊ လူမှန်တာ နဲ့ နိုင်ရောလား။
ဇီဇီခင်ဇော် says: မပြောနဲ့တော့ အရီးရေ။
kai says: တကယ်က.. အထည်ချုပ်လောကမှာ.. ယူအက်စ်ဘရန်းတွေအများဆုံး..။
ဦးကြောင်ကြီး says: အလို… ဘွားဒေါ်ထိ စက်စက်မခံ Cat Catလှံ ဒွေပါယား… ဒါနဲ့ တဖက်ပိတ်မဲသွပ် ဘယ်ရောက်နေပါလိပ်…။
@QUIL@ says: A players must hire A players.
kai says: ကျပ် ၃၆၀၀ မပေးနိုင်ဆိုသော နိုင်ငံခြားသားပိုင်စက်ရုံများ လုပ်ငန်းလျှောက်ထားစဉ် အဆိုပြုလစာနှင့်ကွဲလွဲနေ
Alinsett @ Maung Thura says: စစ်သားတွေ ဥပဒေပြုရေး မလုပ်သင့် စစ်တန်းလျား ပြန်သင့်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: တစ်ခါ တစ်ခါ ကျနော်တို့ မှာ အတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ ဘဲ အငြင်းအခုန်ဖြစ်ရ
Mike says: .တိုတိုပြောရရင် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ မသတ်မှတ်သင့်သေး
aye.kk says: မှန်ပါတယ်။
အောင် မိုးသူ says: တရားခံဘယ်သူလဲဟေ့………..ပြော……